सेवाग्राहीसँग घुस लिने नेपालगन्ज वितरण केन्द्रका ३ कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
सेवाग्राहीसँग घुस लिने नेपालगन्ज वितरण केन्द्रका ३ कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा
बैशाख २७, २०७५ 4803 ऊर्जा खबर/काठमाडौँ
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेपालगन्ज वितरण केन्द्रका ३ जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ । आयोगको कोहलपुर क्षेत्रीय कार्यालयले सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गरेको अवस्थामा उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ पर्नेमा इन्जिनियर निसारअहमद खान, सुपरभाइजर विक्रान्त शुक्ला र कार्यालय सहयोगी गिरवरलाल धोबी छन् । उनीहरुले सेवाग्राहीबाट मिटर जडान तथा नामसारी गर्न १५ हजार घुस लिएको खुलेको छ ।
सेवाग्राहीको मिटर जडान तथा नामसारी गर्न कर्मचारीले घुस मागेको खुलेको प्राधिकरणको नेपालगन्ज क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख मनोज सिंहले बताए । घुस लिने कर्मचारीको नाम खुले पनि विस्तृत विवरण आइनसकेको उनले बताए ।
यसअघि पोखरा र काभ्रेमा पनि थ्री फेज मिटर बदली गर्न सेवाग्राहीबाट घुस लिने कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा परेका थिए । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयले अनावश्यक शीर्षकमा सेवाग्राहीसँग रकम असुली नगर्न पटक पटक निर्देशन दिए पनि वितरण केन्द्रले मिटर दिने नाममा घुस लिंदै आएका छन् ।
हरेक पटक तल्लो तहका कर्मचारी अख्तियारले पक्राउ गरे पनि वितरण केन्द्र प्रमुखसम्मको निर्देशनमा सेवाग्राहीसँग अनावश्यक शीर्षकमा रकम असुल्ने गरिएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।